Spy Car Charger (Or) GPS Car Charger အား ကမာရွတ် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
ဖုန်းကို အားသွင်းရင်း ကားရဲ. တည်နေရာကို ကြည့်နိုင်ဖို.
Spy Car Charger လေးကို Rocket မှာ
ပုံမှန် အားသွင်းသလိုမျိုး ဖုန်းအားသွင်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အားဖြုတ်ထားတာတောင်မှ Stand by 12ရက်လောက် ခံပါတယ်။
ကားထဲမှာ ထည့်ထားရင် မြင်နေလည်း Spy မှန်း မသိနိုင်တော့ပါ။
Car Charger ထဲ ထည့်ထားတဲ sim card နံပါတ်ကို တိုက်ရိုက်ခေါ်လိုက်ရင် ဘေးက အသံတွေ ကြားရပါမယ်။
SD ကဒ်ထည့်ပြီး အသံဖမ်းနိုင်ကာ နောက်မှ ပြန်နားထောင်နိုင်ပါမယ်။
၂။ Location ကြည့်နိုင်ခြင်း
ကားရဲ. တည်နေရာကို သိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်ကားကို တခြားသူ ပေးထားရမယ်ဆိုရင် ပျောက်သွားမှာ စိတ်ပူစရာ မလိုတော့ပါ။
မိမိကားထဲ သူစိမ်းဝင်လို. အသံတွေ ကြားရရင် ကိုယ့်ဖုန်းကို ပြန်ခေါ်ပေးပါမယ်။
ညအချိန် လမ်းပေါ်မှာ ကားထားသူများအတွက် အထူးသင့်တော်တဲ function လေးပါနော်။
၄။ ကိုယ်ပိုင် Battery ရှိခြင်း
Cigarette Lighter က ဖြုတ်ထားတာတောင်မှ Stand By 10 ရက်ခံတာကြောင့် အရမ်းကောင်းတဲ Spy စက်လေး ဖြစ်ပါတယ်။
အသုံးပြုနိုင်သော Code များ
QQQ – ချိတ်ဆက်ခြင်း
EEE – SD ကဒ်ထဲ အသံ မှတ်သားခြင်း
FFF – 40db အထက် အသံ ဆူညံလာရင် ဖုန်းပြန်ခေါ်ပေးခြင်း
GGG – Location စုံစမ်းခြင်း
HHH – စက် အခြေအနေ စုံစမ်းခြင်း
III – စက်ကို Restart ချခြင်း
DDE – Memory ကို ဖျက်ခိုင်းခြင်း
DDD – နဂို အခြေအနေအတိုင်း ပြန်ထားခြင်း (Reset)
ဈေးနှုန်း – 30000 kyats Delivery free in Yangon (ရန်ကုန်မြို.တွင်း ၆မြို.နယ်သာ)
အမည်: Spy Car Charger (Or) GPS Car Charger